Chillax Relax & Banya kufutshane Vladivostok
Vladivostok, Primorskiy kray, Russia
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguСветлана
I-Chillax Relax & Banya ikwilali emnandi yeholide, apho umoya uhlala ucocekile kwaye umtsha. Indlu yethu yenzelwe ukuphumla: i-pool, i-sauna, igumbi lemidlalo, i-karaoke, i-cinema, intendelezo enendawo yokupaka, ibala lokudlala, i-gazebo yokuphumla nokutya, indawo yokosa inyama /
I-Chilaks ifumaneka kwidolophana yeeholide apho umoya uhlala ucocekile kwaye uhlambulukile. Indlu yenzelwe ukuphumla: ichibi lokuqubha, i-sauna, igumbi lemidlalo, i-karaoke, icinema, ukufunda, intendelezo enendawo yokupaka, indawo yokudlala, i-gazebo yokuphumla kunye nokutya, indawo yebarbecue.
Indawo esembindini yendlu ihlala ishushu ichibi kunye ne-sauna. Indlu inamagumbi okulala amabini atofotofo, iholo yecinema ebusuku ijika ibe ligumbi lokulala elitofotofo elineebhedi ezine zokulala ezi-2.
Sikwanayo negumbi elikhulu lemidlalo kunye nokubukela iimuvi zakho ozithandayo. Sinekaraoke, ilayibrari encinci kunye nelayibrari yefilimu ngesiNgesi nesiRashiya, imidlalo yebhodi, amathoyizi kubantwana abancinci.
Ikhitshi lethu lixhotyiswe ngayo yonke into efunekayo ekuphekeni nakwizitya zabantu abali-12.
Ummandla ubiyelwe, unomnyango ohlukeneyo kwindawo yokupaka yangasese, i-gazebo yokuphumla nokutya, i-barbecue, indawo yokudlala.
Kwindawo yakho epheleleyo kusoloko kukho ichibi elifudumeleyo.
Iiyure ze-4 ze-sauna zifakwe imihla ngemihla kwixabiso.
Le yindawo entle yokuhlala.
Sithetha isiNgesi nesiRashiya.
Indawo esembindini yendlu ihlala iyichibi elifudumeleyo kunye ne-sauna. Indlu inamagumbi amabini okulala apholileyo, igumbi le-cinema liguquka ngokulula libe ligumbi lokulala elipholileyo elineebhedi ezi-4 ezimbini ebusuku.
Kukho igumbi elikhulu lokudlala kunye nokubukela iifilimu ezizithandayo, i-karaoke, ilayibrari encinci kunye nelayibrari yefilimu ngesiNgesi nangesiRashiya, imidlalo yebhodi, iithoyi zabantwana abancinci.
Ummandla ubiyelwe, unomnyango ohlukeneyo kwindawo yokupaka yangasese, i-gazebo yokuphumla kunye nokutya, i-barbecue, indawo yokudlala.
Iiyure ze-4 zokusebenza kwe-sauna imihla ngemihla zibandakanyiwe kwixabiso.
Le yindawo entle yokuphumla.
Iidolophana ezintle zeeholide zaseVladivostok zifumaneka kwiphecana elithi "Nightingale Key". Apha umoya uhlala ucocekile kwaye uhlaziyekile.
Kwakukule ndawo ineemeko zemozulu ezizodwa zephecana apho sakha indlu yokuphumla "Chillax Relax&Banya".
Umbuki zindwendwe ngu- Светлана
Ujoyine nge- 2019 Okthoba
Ndivuleleke kunxibelelwano, ukuba kuyimfuneko kwiindwendwe.
Ndivuleleke kunxibelelwano ukuba kuyimfuneko kwiindwendwe.
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-$131